हाम्रो पेट किन कराउँछ ? | Ratopati
हाम्रो पेट किन कराउँछ ?
personरातोपाटी संवाददाता exploreकाठमाडौं access_timeबैशाख १४, २०७६ chat_bubble_outline0
के तपाईं कहिले धेरै बेरसम्म केही पनि नखाई बस्नु भएको छ ? बस्नु भएको छ भने अवश्य पनि तपाईंको पेट त्यति बेला विभिन्न खाले आवाजमा कराएको पनि होला । किनभने हामी धेरै बेर केही पनि नखाई बस्ने हो भने हाम्रो पेट आफै कराउन थाल्छ । डाक्टरहरुले यसलाई बोरबोरिग्मी (borborygmi) भन्ने गर्छन् । यो शब्द हाम्रो पेट कराउँदा आउने आवाजसँग पनि केही हदसम्म मेल खाने गर्छ ।